Breaking : Yaa'ii Dhaabbatummaa 9ffaa irratti Maqeeffamni paartii Keenya "Oromo Democratic Party" (ODP) ta'ee mirkanaa'ee jira. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBreaking : Yaa’ii Dhaabbatummaa 9ffaa irratti Maqeeffamni paartii Keenya “Oromo Democratic Party” (ODP) ta’ee mirkanaa’ee jira.
Breaking: Yaa’ii Dhaabbatummaa 9ffaa irratti Maqeeffamni paartii Keenya “Oromo Democratic Party” (ODP) ta’ee mirkanaa’ee jira. Asxaan haaraan paartichaas yaa’idhaaf sirreffama muraasa waliin ta’ee mirkanaa’ee jira!
Hoggansi buleeyyiin Paartii Keenya armaan gadii kabaja guddaadhaan geggeeffamanii jiru!
Qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol’aanaa taasisftaniif galatoomaa!
1. Jaallee Abbaa Duulaa Gammaadaa
2. Jaallee Geetaachoo Badhanee
3.Jaallee Kumaa Dammaqsaa
4.Jaallee Girmaa Birruu
5. Jaallee Geetaachoo Badhaanee
6. Jaallee Dirribaa Kumaa
7. Jaallee Isheetuu Dassee
8.Jaallee Tafarii Xiyyaaruu
10. Jaallee Daggifee Bulaa
11. Jaallee shifarraaw Jaarsoo
12. Jaallee Abarraa Hayiluu
13.Jaallee Suleemaan Daddafoo
14. Jaallee Ittafaa Tolaa
16. Jaallee Daanyaachoo Shifarraa
17. Jaallee Giiftii Abbaa Siyyaa
Faaruun Dhaabbatumaa Haaraan Paartii Keenyaa kan Armaan Gadii Akka Ta’u Yaa’ii Dhaabbattummaa 9ffaaf Dhiyaatee jira
የግንቦት 7 አፈ ቀላጤ አቶ ኤፍሬም ማዲቦ ለቢቢሲ በሰጠው መግለጫ ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ጋር እንዳልተለያዩ ተናግሯል፡፡
Birhanu Rorrisaa says:
baayyee Waan namatti toluudha